Golaha guurtada wuxuu ka kooban yahay wakiilada beelaha Gobolka Hiiraan. Golaha guurtada wuxuu ka kooban yahay 21 xubnood oo matala dhamaan beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan Gobolka Hiiraan.
Xubnaha golaha guurtada waxaa laga soo xulaya dhamaan beelaha Gobolka Hiiraan iyadoo xubin kasta lagu soo dooranayo aqoon, waacinimo, xilkasnimo, daacadnimo iyo soomaalinimo.
Guurtidu waxaa xubin ka ah 21 rug cadaa oo matalaya beelaha Gobolka Hiiraan
Magacyada xubnaha Golaha Guurtada:
Ugaas cali ugaas xasan ugaas rage
Nabadoon cali abuukar sh.xasan
Ugaas moliid c/laahi
Suldaan c/qani sh.c/laahi
Suldaan xuseen cismaan sh.yuusuf
C/casiis maxamad cismaan
Maxamad daahir macalim nuur
Isloow rooble qaasim cismaan
Nabadoon c/laahi cabdi isaaq
Nabadoon ibrahim maxamad cabdulle
Nabadoon cismaan dhicisoow dhuuboow
Garaad guhaad haabiil
Fuad madoobe cabdi
Nabadoon cabdi cali dhoore
Cali omar cismaan
Cabdi muxumad xuseen
C/laahi axmad c/dulle
Nabadoon c/xakiin nuur xaashi
Nuur c/laahi cilmi
Guddiga fulintu wuxuu ka kooban yahay xubnaha hoos ku xusan:
Guddoomiye ku xigeenka & Arrimaha Maaliyada
Guddoomiye ku xigeenka 2-aad & Arrimaha Amniga
Xoghayaha arrimaha Beeraha
Xoghayaha arrimaha caafimaadka
Xoghayaha Arrimaha Haweenka Iyo Caruurta
Xoghayaha Arrimaha waxbarshada
Xoghayaha arrimaha gudaha iyo dibada (xidhiidhka caalamiga)
Taliyaha ciidanka gobolka Hiiraan
Golahan waxaa loo dhisay inuu samatabixiyo shacabka reer Hiiraan, isla mar ahaantaana abuuro jawi iyo aasaas looga tashado aayaha iyo mustaqbalka gobolka Hiiraan.
In laga abuuro jawi nabadeed iyo xasilooni buuxda dhamaad degaanada gobolka Hiiraan
In loo gargaaro, dib u dhis iyo dib u dejin loo sameeyo dadka dhiban iyo degaanada ay halakeysay colaada iyo dagaalada sokeeye,
In la horumariyo, dibna loo soo nooleeyo qeyraadka iyo barwaaqada gobolka lagu yaqaan
In laga shaqeeyo danta guud, lana dhowro xuquuqda dadka, dalaga, iyo duunyadaba
In xiriir wanaagsan lala yeesho dowlada federaalka iyo dalka aan deriska nahay ee Itoobiya
In la dar dar geliyo xiriirka iyo wada shaqeynta hay’adaha samafalka
In lagu maamulo gobolka nidaam sharciga waafaqsan, lidi’na ku aheyn dowlada federaalka
In la helo cadaalad, midnimo, qaranimo, iyo la sugo amniga shacabka gaar ahaan, iyo gobolka guud ahaan.
In shacabka reer hiiraan ay ku abtirsadaan gobolka, lagana fogaada qabiilka iyo kala qeybinta bulshada
In la soo dhaweeyo nabada, lagana fogaado colaada iyo in la dhibaateeyo shacabka gobolka
Gudoomiyaha gudiga fulinta: Mudane Abdi Faarax Daahir
Waa mas’uulka koowaad, wuxuuna hagaa, hubiyaa habsami u socodka hawlaha Guddiga Fulinta iyo barnaamijka Golaha
Wuxuu hawlgaliyaa oo uu kormeeraa xubnaha Guddiga Fulinta.
Wuxuu hawl galin karaa xubno aan ka mid ahayn Gudiga Fulinta markii loo baahdo, isagoo kala tashanaya Guddiga Fulinta.
Gudoomiyuhu ma laha awood go’aan gaarid kalinnimo.
Waa soo ururiyaha aaraa’da, fikradaha iyo talooyinka bulshadu usoo jeedinayso Golaha, soona hordhigo guddiga fulinta iyo golaha Guurtada.
Gudoomiyaha ku xigeenka, xoghayaha arrimaha maaliyada: Mudane Iidle Siyaad Shiikh Khaliif
Wuxuu si ku meel gaar ah u matalaa jagada gudoomiyaha Golaha, marka guddoomiyuhu maqan yahay.
Wuxu muddadaa gudaheeda ku hawlgelinayaa Guddiga Diyaarinta Doorashada
Wuxuu mas’uul ka yahay diiwaangelinta hantida Golaha.
Wuxuu mas’uul ka yahay khasnadda, xisaabaadka (accounts) iyo dhaqaalaha Golaha.
Wuxuu diyaariyaa qorshe dhaqaaleedka Golaha ee sanadka soo socda.
Wuxuu dabagalaa soona ururiyaa lacagaha xubunimada Golaha.
Gudoomiyaha ku xigeenka, xoghayaha arrimaha Amniga: Mudane Yuusuf Shiekh Nuur
Wuxuu si ku meel gaar ah u matalaa jagada gudoomiyaha Golaha, marka guddoomiyaha iyo gudoomiye xigeenka
1-aad maqan yihiin.
Wuxuu buuxinayaa jagada guddoomiyaha ama gudoomiye xigeenka 1-aad haddii ay noqoto in guddoomiyaha iyo gudoomiye xigeenka 1-aad is casilaan ama ay ku timaaddo duruuf u diidda gudashada xilkooda, inta dib looga dooranayo guddoomiye iyo kuxigeenka koo waad ugu badnaan muddo 3-bilood ah
Wuxuu masuul ka yahay Arrimaha AMNIGA
a. Wuxuu soo diyaarin qorshaha lagu xasilin gobolka
a. wuxuu masuul ka yahay inuu hago howlaha boliiska, nabadsugida iyo xasiloonida gobolka
Gudoomiyaha ku xigeenka, xoghayaha Guud: Mudane Abdirizak Rashiid Cumar
Wuxuu isku xiraa hawlaha Guddiga Fulinta.
Wuxuu diyaariyaa qoraallada shirarka Golaha Guurtada iyo Guddiga Fulinta.
Wuxuu tixraac ku sameeyo kulammada Guddiga Fulinta, islamarkaana u diro tixraacaas xubnaha Guddiga Fulinta, Guddiga Hantidhawrka iyo Golaha Guurtada.
Wuxuu kaydiyo go’aammada ka soo baxa Guddiga Fulinta iyo Golaha Guurtada.
Wuxuu xafido waraaqaha iyo shaabadda Golaha.
Wuxuu ka warqabo islamarkaana diwaangaliyo qoraallada la xiriira mashaariicda Golaha.
Wuxuu mas’uul ka yahay qalabka iyo shaqaalaha xafiiska Golaha.
Gudoomiyaha ku xigeenka, xoghayaha arrimaha Beeraha: Mudane Abdikariim Hassan Qeyre
Wuxuu masuul ka yahay arrimaha Beeraha, Dalaga, iyo Duunyada
Waa kawarqabaha, kormeeraha dhulbeereedka iyo beeraleyda gobolka.
Waa talo ka bixiyaha, una adeegaha sidii loo horumarin lahaa, loona kobcin lahaa wax soo saarka dalaga iyo duunyada
Waa ka shaqeeyaha sidii kor loogu qaadi lahaa tayadda beeraha iyo beeraleyda
Waa ka shaqeeyaha isku xirka beeraleyda iyo suuqyada loo iibgeyn dalaga iyo duunyada
Waa in uu warbixin ku saabsan arrimaha beeraha horkeeno guddiga fulinta.
Gudoomiyaha ku xigeenka, xoghayaha arrimaha Caafimaadka: Mudane Axmed Ibrahim Hussein
Wuxuu mas’uul ka yahay xarumaha caafimaadka
Wuxuu mas’uul ka yahay diyaar gareynta, iyo dhaqan gelinta howlaha caafimaadka
Wuxuu masuul ka yahay soo diyaarinta barnaamij looga hortagayo cudurada sida guud ama gaar u saameeya gobolka.
Wuxuu masuul ka yahay diyaar gareynta iyo dhaqan gelinta mashruuca talaalka lagu badbaadin dhalaanka gobolkaa
Wuxuu masuul ka yahay diyaar gareynta mashruucyada ka hortaga cudurada halista u ah caruurta, waayeelka, iyo bulshada inteeda kale
Wuxuu masuul ka yahay wacyi gelinta bulshada arrimaha la xiriira caafimaadka
Gudoomiyaha ku xigeenka, Taliyaha ciidanka Gobolka Hiiraan: Mudane Ahmed Shukri Macalin
Wuxuu masuul ka yahay sugida amniga degaanada uu ka arrimiyo Golahan
Wuxuu masuul ka yahay diyaar gareynta iyo dhaqangelinta qorshaha lagu sugi amniga xuduudaha gobolka iyo degaanada uu golaha ka arrimiyo
Wuxuu masuul ka yahay inuu horkeena golaha qatarta iyo xasilooni darada ku imaan karta gobolka, iyo weliba halka ay uga imaan karaan
Wuxuu masuul ka yahay, soo diyaarinta barnaamij loogu hortagayo qatarta ama xasilooni darada soo wajahda, ama soo wajihi karta gobolka
Wuxuu howlgeliyaa ciidama sugi amaanka gobolka
Shirkii Deefoow ee Golaha Samatabixinta iyo aayo ka talinta Shacabka Hiiraan
Halkan ka daawo shirka Golaha Samatabixinta ee magaalada Deefoow:
Shirka oo ka socday magaalada Deefoow mudo Wiig ah, laga soo bilaabo 04.maajo.2015 ilaa 11.maajo.2015.Waxaa shirkan ka soo qeyb galay dhamaan 12 beelood ee ku dhaqan gobolka Hiiraan, halka labada beelood ee kale oo aanan soo xaadirin midna la sugayey, beesha kalena aysan ka soo qeyb gelin.
Shirkaan oo ahaa shir dhidibada loogu aasayey aayaha iyo samatabixinta beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka ayaa abaabulkiisa soo socday ilaa muddo seddex bilood ah kana socday magaalada Baladweyne. Hogaanka golahan ayaa dhaqan geliyey kulamo joogta ah oo looga hadlayey arrimaha nabadeynta iyo dib heshiisiinta beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan Gobolka Hiiraan, halkaas oo ay 13 beelood ay nabada qaateen, qalinkana ku duugeen hishiis nabadeed.
Intaas ka dib ayaa si looga saaro shacabka gobolka dhibaatada iyo colaada gobolka ku habsatay 25 sanadood ee ugu danbeeyey, laga soo bilaabo xiligii uu bilowday dagaalkii sokeeye 1991, ayaa waxay isla garteen hogaanka beelaha gobolka Hiiraan in la qabto shir lagu aasaasay Golaha Samatabixinta iyo aayo ka talinta Shacabka Hiiraan.
Baahida keentay in la dhiso golahan ayaa ah in gobolka Hiiraan la nabadeeyo, cadaalad, sinaan, deris wanaag, leyskana kaashado horumarka, samatabixinta iyo aayo ka talinta gobolka iyo shacabka reer Hiiraan.
Golahan ma aha gole mucaarad ku ah dowlada federaalka ama dowlada deriska ee Itoobiya.
Waa taariikh cusub, oo umada hiiraan u furaysa baal dahab ah, halkaas oo ay dhacday in leysu keeno 12 beelo soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka.
Waxaa la doortay gudoomiye qabta hogaanka golahan, dhaqa, dhiiga reer Hiiraana kala badbaadiya. Gudoomiyaha golahan waxaa la yiraahdaa Cabdi Faarax Daahir.
Ujeedada iyo hadafyada uu hiigsanayo golahan ayaa ah sidan hoos ku xusan;
Hogaanka golahan ayaa u dhaqaadi doono dhamaan degaanada iyo xuduudaha gobolka, kana shaqeyn doono dib u hishiisiin iyo in la nabadeeyo dhamaan degaanada shacabka reer Hiiraan.
Shirka dib uheshiisiinta iyo aayo katalinta g.hiiraan wajigiisi sadaxaad oo kafurmay galbeedka magaalada b/weyn hoteel daaru salaam
Shirkan oo furmar maalininta arbacada, 17.juun.2015, Hoteel Daaru Salaam oo ku yaal Galbeedka Magaalada Baladweyne ayaa waxaa ku soo qulqulaya beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Hiiraan.
Shirkan oo ah wajigii seddexaad, halka oo ay ka horeeyeen labo shir oo kale, midkii ugu danbeeyeyna uu ahaa shirweynihii laga qabtay magaalada Deefoow.
Halkan ka daawo sawirada shirka Golaha Badbaadada iyo Aayo ka talinta reer Hiiraan:
Shirka aayo katashiga Beelaha Gobolka Hiiraan ee kasocda Magaalada Deefoow.
Halkan ka daawo shirka Deefow oo ay ku dhan yihiin Beelaha nabada jecel ee ku midoobay badbaadinta shacabka iyo mustaqbalka gobolka Hiiraan.
Daawasho wacan oo wanaagsan: